मुख्यसचिव र सुरक्षा प्रमुखहरुसँग एमाले टोलीकाे छलफल, निर्वाचन सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त - Naya Patrika
मुख्यसचिव र सुरक्षा प्रमुखहरुसँग एमाले टोलीकाे छलफल, निर्वाचन सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त
शुरोजंग पाण्डे काठमाडौं, ७ मंसिर | मङि्सर ०७, २०७४
एमालेले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीसहित तिनओटै सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुसँग निर्वाचन सुरक्षा केन्द्रीत छलफल गरेको छ । एमालेको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीले निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउनका लागि सम्भावित धाँधली रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको प्रवक्ता विष्णु रिमालले बताए ।
छलफलमा सरकारले आचारसंहिताविपरीत प्रहरी र प्रशासनका प्रमुखहरुको सरुवा र हेरफेर तथा त्यसले स्वच्छ निर्वाचनमा पार्नसक्ने असरको बारेमासमेत ध्यानाकर्षण गराइएको उनले जानकारी दिए ।
एमाले टोलीले आचारसंहिताविपरीत काम नगर्नका लागि पनि सचेत गराएको छ । छलफलमा एमालेका तर्फबाट निर्वाचन परिचालन कमिटीका सदस्यहरु मुकुन्द न्यौपाने, विष्णु रिमाल, अग्नि खरेल, बिन्दा पाण्डे, युवराज कार्की र रमेश बडाललगायत सहभागी रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसलाई ओलीको प्रश्न : राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद बिपीले सनकका भरमा लेख्नुभएको हो ? http://enayapatrika.com/enaya/2017/11/23/151/
त्यस्तै, एमालेले दोलखामा कांग्रेस र विप्लव माओवादीबीचको गोप्य मिटिङका विषयमा सार्वजनिक भएको समाचारप्रति जवाफ पनि माग गरेको छ । उता, निर्वाचन परिचालन कमिटीका सदस्य अग्नि खरेल नेतृत्वको अर्को टोलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधी यादवलाई भेटेर स्वच्छ निर्वाचन र प्रहरी प्रशासनलाई प्रयोग गरी हुनसक्ने लक्षित धाँधलीप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
एमालेले संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रबाट मतपेटिका गणनास्थलमा ल्याउँदा कानुनबमोजिम उमेदवारको प्रतिनिधि रहन पाउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि समेत आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।